Kismaayo: Dadka Deegaanka Oo Si Weyn U Soo Dhaweeyay Booqashada Ra’isul Wasaare Khayre – Goobjoog News
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre oo booqasho 3 maalmood ah ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubblanad ayaa lagu waramayaa in uu ku kuurgalay xaaladda dadka iyo deegaanka.
Tilaabadan oo nooceeda ah muddada 100-ka maalmood ee xukuumadda Khayre, waa qaab cusub oo dadka ku nool gobollada dalka lagu gaarsiinayo laguna wanaajinayo xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah.
Mr. Khayre ayaa inta uu Jubbaland joogay waxaa uu qabtay shirkii golaha wasiirada ee Khamiislaha ahaa, Kormeel uu ku tagay goobo magaalada Kismaayo ah iyo qeybo kale oo gobolka ka tirsan sida Goobweyn.
Dadka deegaanka oo la hadlay Goobjoog News waxaa ay sheegayaan in ay aad ugu farxeen aragtida wasiirka 1aad iyo in uu dhageysto dhibaatada heysata, waxaa kale oo arrintaasi laga soo dhaweeyay magaalada Muqdisho.
Hadaba, Daawo Sawirrada Safarka Ra’isul Wasaare Khayre: